၂၀ နှဈအရှယျလို့ ဆေးပညာမကျြစိလညျစတေဲ့ ရျောနယျလျဒိုရဲ့ လြို့ဝှကျခကျြကို ထုတျဖျောပွောလိုကျတဲ့ ဂြူဗီအသငျးဖျော – Sports A2Z
Article • International • Serie A
အသကျ ၃၆ နှဈအရှယျအထိ အကောငျးဆုံးပုံစံကို ဆကျထိနျးထားနိုငျပွီး မလိုအပျဘဲ တောငျပံတှမှော ထှကျပွေးပွီး မှနှေောကျတတျတဲ့ ပုံစံ တဈခုတညျးကိုသာ လြှော့ခခြဲ့တဲ့ ခရစ်စတီယာနို ရျောနယျလျဒိုရဲ့ ကွံ့ခိုငျမှုနဲ့ ကွှကျသားတညျဆောကျပုံအရ ဆေးပညာဘကျက အသကျအရှယျ ဘယျလောကျလို့ သတျမှတျခဲ့သလဲ သငျသိပါသလား? အသကျ ၂၀ ပါ။
ဒီလိုမြိုး သူ့ရဲ့ ခုနှဈသက်ကရာဇျတှနေဲ့ မဆိုငျတဲ့ Physical Age ကို ထိနျးသိမျးထားနိုငျတာကတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ တလောက လှုပျလှုပျရှားရှား ဖွဈသှားခဲ့တဲ့ ကိုကာကိုလာကို ငွငျးပယျခဲ့သလိုမြိုး ကာဘှနျဒိုငျအောကျဆိုဒျထညျ့သှငျးထားတဲ့ အခြိုရညျတှကေို ရှောငျရှားခွငျးအပါအဝငျ တိကတြဲ့ စားသောကျပုံကို တငျးတငျးကွပျကွပျ ထိနျးသိမျးထားခဲ့လို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
သူ့ရဲ့ နထေိုငျစားသောကျပုံနဲ့ လကေ့ငျြ့ပုံကိုတော့ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးရဲ့ လူငယျကစားသမား ဒါအူဒါ ပီးတားဈက သူမွငျတှခေဲ့ရသလောကျ ထုတျဖျောသှားခဲ့ပွီး အခုလိုမြိုး ဘောလုံးကစားနညျးရဲ့ အမွငျ့ဆုံးပုံစံမှာ ရပျတညျနနေိုငျဖို့ ရျောနယျလျဒိုဟာ ကွကျသားကို အတျောမြားမြား စားသုံးလရှေိ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။
“သူစားတဲ့ အစားအစာက အမွဲတမျးတူတူပဲ။ ဘရိုကိုလီပါမယျ… ကွကျသားရယျ၊ ထမငျးရယျပေါ့။ ရမြေားမြားသောကျတယျ၊ ကိုကာကိုလာတော့ လုံးဝရှောငျတယျ။ သူက နိုငျလိုစိတျပွငျးပွတဲ့ ဘောလုံးသမားပါ။ အခုလိုမြိုး ကွှကျသားအတိပွီးတဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို ထိနျးသိမျးထားနိုငျဖို့ သူ့ရဲ့ ကွိုးစား အားထုတျမှုက ပွငျးထနျပွီး အားကစားခနျးမမှာလညျး အမွဲတမျး မွငျတှနေ့ရေပါတယျ”လို့ ပီးတားဈက ထုတျဖျောသှားပါတယျ။
ရျောနယျလျဒိုဟာ တဈနကေို့ ၆ ကွိမျ စားသောကျလရှေိ့ပွီး အရကျသစောနဲ့ အမွှုပျထတဲ့ အခြိုရညျတှကေို ရှောငျရှားလရှေိ့သူပါ။ သူကတော့ လကေ့ငျြ့မှုကောငျးဆိုတာ ကောငျးမှနျပွီး စညျးစနဈကနြတဲ့ စားသောကျပုံနဲ့ ယှဉျတှဲထားရတယျလို့ဆိုခဲ့ပွီး ပုံမှနျစားသုံးဖို့နဲ့ ပုံမှနျလကေ့ငျြ့ဖို့ လိုတယျလို့ ပျေါတူဂီသားကွီးက ဆိုပါတယျ။
“ကြှနျတျောက ပရိုတိနျးမွငျ့မားတဲ့ အစားအစာတှေ စားတယျ… ကာဘိုဟိုကျဒရိတျကွှယျဝတဲ့ အစအေ့ဆနျတှေ၊ သဈသီးတှကေို စားသုံးပွီး သကွားဓာတျပါတဲ့ အရာတှကေို ရှောငျရှားပါတယျ။ အခြိနျမှနျမှနျ စားပေးတာက ခငျဗြားကို အမွငျ့ဆုံးအဆငျ့မှာ လကေ့ငျြ့နိုငျစဖေို့ လိုအပျတဲ့ စှမျးအငျကို ပေးပါလိမျ့မယျ။ ကြှနျတေျာ့အနနေဲ့ တဈနကေို့ လိုအပျခကျြအပျေါ မူတညျပွီး ၆ ကွိမျအထိ အစားအစာကို မြှတစားသုံးပါတယျ”
ရျောနယျလျဒိုက သူ့ရဲ့ အစားအသောကျနဲ့ လကေ့ငျြ့မှုအပွငျ အရေးကွီးတဲ့ အကွောငျးအရာတဈခုကိုလညျး မြှဝသှေားပွီး စိတျဓာတျခှနျအားရှိဖို့နဲ့ ရညျမှနျးခကျြကွီးကွီးထားပွီး မိမိကိုယျကို ပနျးတိုငျဆီ မောငျးနှငျဖို့ တိုကျတှနျးသှားခဲ့သလို နစေ့ဉျဘဝမှာ စညျးကမျးတကြ နထေိုငျကငျြ့ကွံတတျစဖေို့လညျး အကွံပေး တိုကျတှနျးသှားခဲ့ကွောငျးလညျး သိရှိရပါတယျ။
ZAWGYI: အသက် ၃၆ နှစ်အရွယ်အထိ အကောင်းဆုံးပုံစံကို ဆက်ထိန်းထားနိုင်ပြီး မလိုအပ်ဘဲ တောင်ပံတွေမှာ ထွက်ပြေးပြီး မွှေနှောက်တတ်တဲ့ ပုံစံ တစ်ခုတည်းကိုသာ လျှော့ချခဲ့တဲ့ ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ ကြွက်သားတည်ဆောက်ပုံအရ ဆေးပညာဘက်က အသက်အရွယ် ဘယ်လောက်လို့ သတ်မှတ်ခဲ့သလဲ သင်သိပါသလား? အသက် ၂၀ ပါ။
ဒီလိုမျိုး သူ့ရဲ့ ခုနှစ်သက္ကရာဇ်တွေနဲ့ မဆိုင်တဲ့ Physical Age ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တာကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ တလောက လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ ကိုကာကိုလာကို ငြင်းပယ်ခဲ့သလိုမျိုး ကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ထည့်သွင်းထားတဲ့ အချိုရည်တွေကို ရှောင်ရှားခြင်းအပါအဝင် တိကျတဲ့ စားသောက်ပုံကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ထိန်းသိမ်းထားခဲ့လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ နေထိုင်စားသောက်ပုံနဲ့ လေ့ကျင့်ပုံကိုတော့ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းရဲ့ လူငယ်ကစားသမား ဒါအူဒါ ပီးတားစ်က သူမြင်တွေ့ခဲ့ရသလောက် ထုတ်ဖော်သွားခဲ့ပြီး အခုလိုမျိုး ဘောလုံးကစားနည်းရဲ့ အမြင့်ဆုံးပုံစံမှာ ရပ်တည်နေနိုင်ဖို့ ရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ကြက်သားကို အတော်များများ စားသုံးလေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“သူစားတဲ့ အစားအစာက အမြဲတမ်းတူတူပဲ။ ဘရိုကိုလီပါမယ်… ကြက်သားရယ်၊ ထမင်းရယ်ပေါ့။ ရေများများသောက်တယ်၊ ကိုကာကိုလာတော့ လုံးဝရှောင်တယ်။ သူက နိုင်လိုစိတ်ပြင်းပြတဲ့ ဘောလုံးသမားပါ။ အခုလိုမျိုး ကြွက်သားအတိပြီးတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့ သူ့ရဲ့ ကြိုးစား အားထုတ်မှုက ပြင်းထန်ပြီး အားကစားခန်းမမှာလည်း အမြဲတမ်း မြင်တွေ့နေရပါတယ်”လို့ ပီးတားစ်က ထုတ်ဖော်သွားပါတယ်။
ရော်နယ်လ်ဒိုဟာ တစ်နေ့ကို ၆ ကြိမ် စားသောက်လေ့ရှိပြီး အရက်သေစာနဲ့ အမြှုပ်ထတဲ့ အချိုရည်တွေကို ရှောင်ရှားလေ့ရှိသူပါ။ သူကတော့ လေ့ကျင့်မှုကောင်းဆိုတာ ကောင်းမွန်ပြီး စည်းစနစ်ကျနတဲ့ စားသောက်ပုံနဲ့ ယှဉ်တွဲထားရတယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီး ပုံမှန်စားသုံးဖို့နဲ့ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ဖို့ လိုတယ်လို့ ပေါ်တူဂီသားကြီးက ဆိုပါတယ်။
“ကျွန်တော်က ပရိုတိန်းမြင့်မားတဲ့ အစားအစာတွေ စားတယ်… ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစေ့အဆန်တွေ၊ သစ်သီးတွေကို စားသုံးပြီး သကြားဓာတ်ပါတဲ့ အရာတွေကို ရှောင်ရှားပါတယ်။ အချိန်မှန်မှန် စားပေးတာက ခင်ဗျားကို အမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာ လေ့ကျင့်နိုင်စေဖို့ လိုအပ်တဲ့ စွမ်းအင်ကို ပေးပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ တစ်နေ့ကို လိုအပ်ချက်အပေါ် မူတည်ပြီး ၆ ကြိမ်အထိ အစားအစာကို မျှတစားသုံးပါတယ်”
ရော်နယ်လ်ဒိုက သူ့ရဲ့ အစားအသောက်နဲ့ လေ့ကျင့်မှုအပြင် အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုလည်း မျှဝေသွားပြီး စိတ်ဓာတ်ခွန်အားရှိဖို့နဲ့ ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးထားပြီး မိမိကိုယ်ကို ပန်းတိုင်ဆီ မောင်းနှင်ဖို့ တိုက်တွန်းသွားခဲ့သလို နေ့စဉ်ဘဝမှာ စည်းကမ်းတကျ နေထိုင်ကျင့်ကြံတတ်စေဖို့လည်း အကြံပေး တိုက်တွန်းသွားခဲ့ကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ်။